Safarka Warshadda - Kingsine Electric Automation Co., Ltd.
Maareynta Waxsoosaarka waxay soo bandhigeysaa maareynta moduleka si loo hubiyo in xiriir kasta oo soo saar, oo ay ku jiraan jadwalka, wax iibsiga, Soo saarista, tayada, qalabka, keydinta, iwm. Ay u socon karaan si habsami leh oo waxtar leh.
In kabadan 10 sano horumar iyo urursi, waxaan sameysanay wax soo saar kaamil ah iyo ISO9001: nidaamka maaraynta tayada 2008. Si aan u xaqiijin karno tayada wax soo saarka, tirada iyo muddada la keenay.
Tijaabinta horumarsan iyo qalabka wax soo saarku sidoo kale waxay si aad ah u sii wanaajinayaan heerkayaga wax soo saarkeena waxayna hubinayaan tayadeena
kingine waxay soo bandhigeysaa qalab qalab software ah oo loogu talagalay in lagu bixiyo hawl fudud iyo heerka ugu sareeya ee habeynta AC drives.
Qaar ka mid ahi waa aalado ku shaqeeya websaydhka; kuwa kale waa barnaamijyo keli keli ah oo u baahan doona in lagu rakibo kombuyuutarkaaga. Intaa waxaa sii dheer, cabbiraadda iyo qalabka qaabeynta qaabdhismeedka ayaa loo heli karaa xubnaha Barnaamijka Wadajirka boqortooyada. Waxaad ka akhrisan kartaa waxbadan oo ku saabsan barnaamijka halkan.
Si lagaaga caawiyo inaad sida ugu badan uga faa'iideysato la shaqeynta iyaga, qalab kasta wuxuu leeyahay hage adeegsade oo ku dhisan.
Si ay kuugu fududaato inaad aqoonsato aaladda la xiriirta, waxaa loo isugu geeyay qaybo kala duwan iyadoo loo eegayo ujeeddada aad u adeegsan doontid ama la xiriira faa'iidooyinka gaarka ah.
Shirkadda Kingsine Electric Automation Co., Ltd.
Qofka xiriiriyaha: La waayey Karol
Tel: + 86-755-83418941
Tijaabiyaha Relay Ilaalinta, Imtixaanka gudbinta Dijital ah, Tijaabiyaha gudbinta sirdoonka, Tijaabiyaha gudbinta Ilaalinta Fogaanta, Tijaabiyaha gudbinta farqiga u dhexeeya, Tijaabada gudbinta, Dhammaan Alaabooyinka